4 Azụmahịa Mejọọ Na-eme Nke Na-emerụ Ahụ Obodo SEO | Martech Zone
Nnukwu mgbanwe na-aga n'ihu na nyocha mpaghara, gụnyere ntinye nke Google nke mgbasa ozi 3 n'elu na-akwatu ngwugwu mpaghara ha na ọkwa na mpaghara ngwugwu nwere ike n'oge na-adịghị anya gụnyere ntinye akwụ ụgwọ. Tụkwasị na nke ahụ, ngosipụta mkpanaka dị warara, mmụba nke ngwa, yana nyocha olu na-atụnye ụtụ na asọmpi na-arịwanye elu maka visibiliti, na-arụtụ aka na ọdịnihu ọchụchọ mpaghara nke njikọta nke iche iche na ịzụ ahịa ahịa ga-abụ ihe dị mkpa. N'agbanyeghị nke ahụ, a ga-ahapụ ọtụtụ azụmaahịa na ọkwa kachasị dị mkpa site na ịghara ịnweta ntoala nke mpaghara SEO ziri ezi.
Nke a bụ mmejọ 4 kachasị njọ SEO na-eme nke na-anọchite anya adịghị ike ndị isi na mpaghara ahịa siri ike:
1. Ezighi ezi Mmejuputa iwu-a Call Call Number
Nọmba nsuso oku na-adị ogologo oge na ụlọ ọrụ na-ere ahịa na mpaghara ọchụchọ n'ihi ikike ha nwere ike ịmepụta dịgasị iche iche, data na-ekwekọghị n'ofe weebụ na mmetụta na-adịghị mma na mpaghara. Agbanyeghị, enwere ike itinye ha n'ọrụ na nlekọta iji nye data azụmaahịa bara oke uru. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ maka ịmalite:
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ maka ịmalite:
Otu usoro bụ ibupute gị ugbu a, nọmba azụmaahịa gị na onye na-eweta nsuso oku ka ị nwee ike soro oku na ọnụ ọgụgụ gị dị. Routezọ a na - egbochi gị mkpa ị ga - emezi ndepụta azụmahịa gị.
Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ndepụta azụmahịa gị adịlarịrị na okwute, ọdịdị na-ekwekọghị ekwekọ na mkpa nhicha, gaa n'ihu wee nweta nọmba nyocha ọhụụ, yana koodu mpaghara, ma jiri ya dị ka nọmba ọhụrụ gị. Tupu ịhọrọ nọmba ọ bụla, chọọ ya na weebụ iji jide n'aka na ọ ka nwere nnukwu data akara ukwu maka azụmaahịa ndị ọzọ na-ejibu ọnụ ọgụgụ ahụ (ị chọghị itinye aha ha). Mgbe inwetachara nọmba nsuso oku ọhụụ gị, wee banye na mkpọsa mkpocha ederede gị, tinye nọmba ọhụrụ na ndepụta azụmahịa gị niile, ebe nrụọrụ weebụ gị na usoro ọ bụla ọzọ (belụsọ maka nyiwe mgbasa ozi akwụ ụgwọ) nke na-ekwu banyere ụlọ ọrụ gị.
Ejila nọmba nsuso oku gị kachasị na mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ-kwa-ma ọ bụ ụdị nke mgbasa ozi n'ịntanetị. Ime nke a ga - egbochi ike gị iji chọpụta ma data ọ na - esite na azụmaahịa a na - akwụ ụgwọ. Nweta nọmba nsuso oku pụrụ iche maka mkpọsa akwụ ụgwọ gị. Ndị a anaghị edepụta aha ha site na injin ọchụchọ, yabụ ha ekwesịghị imerụ agbanwe nke data azụmaahịa mpaghara gị. * Kpachara anya maka iji nọmba nsuso oku dị iche iche na mkpọsa na-adịghị n'ịntanetị, ebe ha nwere ike ịme ya na weebụ. Jiri nọmba mbu gị maka ahịa na-adịghị n'ịntanetị.
Njikere igwu miri n'ime nchekwa na ihe ịga nke ọma site na nsuso oku? Na-atụ aro na-agụ: Eduzi Iji Nyochaa oku maka ọchụchọ mpaghara.
2. Nsonye nke Geomodifiers na Aha Azụmaahịa Obodo
Otu n'ime mmejọ kachasị arụ ọrụ ọtụtụ ebe na-eme na ahịa ọchụchọ mpaghara ha na-agbaso gburugburu isiokwu na-ejuputa aha azụmahịa ha na ndepụta azụmahịa ha na mpaghara mpaghara ha na usoro ala (obodo, obodo, ma ọ bụ aha agbata obi). Ọ gwụla ma geomodifier bụ akụkụ nke aha azụmahịa gị iwu ma ọ bụ DBA, Ntuziaka Google kwupụtara machibido omume a hoo haa, sị:
Gbakwunye ozi na-enweghị isi na aha gị (wdg., "Google Inc. - Mountain View Corporate Headquarters" kama "Google") site na itinye akara ngosi ahịa, koodu ụlọ ahịa, ihe odide pụrụ iche, oge ma ọ bụ ọnọdụ mechiri emechi / mepere, nọmba ekwentị, URLs weebụsaịtị, ọrụ / ozi ngwaahịa, ebe/ adreesị ma ọ bụ ntụzi aka, ma ọ bụ ozi nnabata (dịka “Chase ATM in Duane Reade”) anaghị ekwe.
Ndị ọchụnta ego ma ọ bụ ndị na-ere ahịa nwere ike ịgụnye okwu geo na ngalaba aha azụmaahịa ma ọ bụ n'ihi na ha na-anwa ịkpa ókè otu ngalaba site na ndị ọzọ maka ndị ahịa, ma ọ bụ n'ihi na ha chere na ha ga-adịkwu mma ma ọ bụrụ na ndepụta ha gụnyere usoro ndị a. Maka ntụle mbụ, ọ kacha mma ịhapụ ya na Google iji gosi ndị ahịa ngalaba kacha nso ya, nke Google na-eme ugbu a n'ụzọ dị ịtụnanya nke ọkaibe. Maka nyocha nke ikpeazụ a, enwere eziokwu na eziokwu na ịnwe aha obodo na aha azụmaahịa gị nwere ike imezi ọkwa, mana ọ baghị uru ịhapụ iwu Google ịchọpụta.
Yabụ, ọ bụrụ na ị na-ehibe ahia ohuru, ị nwere ike ịtụle iji aha obodo dịka akụkụ nke aha azụmaahịa iwu gị, tinye ya na akara ngosi n'okporo ámá gị, ihe ntanetị na mbipụta, na ekele ekwentị, mana, na ndị ọzọ dịruru ná njọ, nsonye nke geomodifiers na aha azụmaahịa anaghị anabata Google. Na, n'ihi na ịchọrọ ka ndepụta azụmahịa ndị ọzọ na-adaba na data Google gị, ị kwesịrị ịgbaso iwu a n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ amaokwu ndị ọzọ niile, na-edepụta aha azụmahịa gị n'enweghị ndị na-agbanwe agbanwe maka ọnọdụ ọ bụla.
* Rịba ama na enwere otu ihe na nke a. Facebook chọrọ iji geomodifiers maka azụmahịa ọtụtụ ebe. Ha anaghị ekwe ka otu aha, aha ekekọrịta n'etiti ndepụta Facebook. Maka nke a, ịkwesịrị ịgbakwunye onye mmegharị na ọnọdụ azụmahịa Facebook Ebe ọ bụla. N'ụzọ dị mwute, nke a na-emepụta enweghị nkwekọrịta data mana echegbula onwe gị nke ukwuu banyere otu ewepu. Onye ọ bụla n’ime ndị asọmpi gị nwere ụdị azụmaahịa nwere ọtụtụ ebe nọkwa n’otu ụgbọ mmiri ahụ, na-enye uru ọ bụla na-asọmpi ma ọ bụ nsogbu adịghị mma
3. Enweghị Mmepe Peeji Iduo Ebe
Ọ bụrụ na azụmahịa gị nwere alaka 2, 10 ma ọ bụ 200 ma na ị na-atụ aka na ndepụta azụmahịa niile nke ndị ahịa na ndị ahịa na ibe obibi gị, ị na-egbochi oke ike gị iji nyefee ahụmịhe pụrụ iche, ahaziri iche maka ndị ọrụ dị iche iche.
Mpempe akwụkwọ ọdịda (aka 'peeji nke ọdịda mpaghara', 'peeji nke ọdịda obodo') na-agbasi mbọ ike ịnye ndị ahịa (ozi bots engine) ihe kachasị mkpa banyere otu ngalaba ụlọ ọrụ. Nke a nwere ike ịbụ ọnọdụ kacha dịrị ndị ahịa nso, ma ọ bụ ọnọdụ ọ na-eme nyocha tupu ma ọ bụ n'oge njem.
E kwesiri ijikọ peeji nke ọdịda ebe ozugbo / site na ngalaba azụmahịa nke ngalaba ọ bụla, ma nwee ike ịnweta ya na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ site na nchịkọta nhọrọ dị elu ma ọ bụ wijetị ụlọ ahịa. Ndị a bụ ụfọdụ ngwa ngwa na achọghị:
Jide n'aka na ọdịnaya dị na ibe ndị a bụ pụrụ iche. Emegharịla naanị aha obodo na ibe ndị a ma degharịa ọdịnaya ha. Tinye ego na ederede ọ bụla.
Jide n'aka na ihe mbụ dị na ibe ọ bụla bụ NAP zuru ezu nke ebe ahụ (aha, adres, na akara ekwentị).
Dochie nchịkọta ụdị, ngwaahịa na ọrụ a na-enye ha na ngalaba ọ bụla
Tinye gụnyere testimonials ma jikọta profaịlụ nyocha gị kachasị mma maka alaka ụlọ ọrụ ọ bụla
Echefukwala itinye ntuziaka ịkwọ ụgbọala, gụnyere ịchọpụta isi akara ngosi ndị ọbịa nwere ike ịhụ ngwa ngwa na azụmahịa
Elegharala ohere iji pitch kedu ihe kpatara azụmaahịa gị ji bụrụ nhọrọ kacha mma n'obodo maka ihe onye ọrụ chọrọ
Echefukwala ịnye usoro kachasị mma maka ịkpọtụrụ azụmahịa mgbe awa gachara (email, ozi ekwentị, nkata ndụ, ederede) nwere atụmatụ nke ogologo oge ọ ga-ewe iji nụ azụ
Njikere maka miri emi abanye na nka nke imepụta peeji kacha mma n'ime obodo? Na-atụ aro na-agụ: Imeri Egwu Gị Maka Ibe Ọpụpụ Obodo.
4. ileghara anya
Ndị ọkachamara n’ọrụ ụlọ ọrụ kwenyere na ihe atọ ndị a na-emerụ ihe karịa ndị ọzọ na azụmaahịa 'ohere ịnụ ụtọ ọkwa dị elu mpaghara:
Họrọ ihe ezighi ezi otu azụmahịa mgbe ị na-ekepụta azụmahịa azụmahịa mpaghara
Iji a adịgboroja Ọnọdụ maka azụmaahịa ma nwee Google ịchọpụta nke a
inwe adịghị mma aha, adreesị, ma ọ bụ akara ekwentị (NAP) gburugburu weebụ
Ihe abụọ na-adịghị mma dị mfe ịchịkwa: họrọ edemede ziri ezi ma ghara ịgha ụgha data ọnọdụ. Nke atọ, Otú ọ dị, bụ nke nwere ike ịba ụba na-enweghị onye nwe azụmaahịa na-amataghị ya. Ihe ojoo NAP ojoo nwere ike isi na ihe obula ma obu ihe ndia:
Oge mbu nke Ochicho Obodo mgbe igwe na-acho ihe na akpaghi aka site na otutu ihe di na ya na uzo ozo
Azụmahịa ahagharịrị, na-agagharị, ma ọ bụ na-agbanwe nọmba ekwentị ya
Mmejuputa iwu na ezighi ezi nke onu ogugu oku
Obere okwu banyere data ojoo, dika na blog posts, ozi intaneti, ma obu nyocha
Ikekọrịta data n'etiti ndepụta abụọ na-eme ka ọgba aghara ma ọ bụ njikọ jikọtara
Ihe na-ekwekọghị ekwekọ na weebụsaịtị ụlọ ọrụ n'onwe ya
N'ihi na data azụmahịa nke obodo na-agagharị na gburugburu obibi ilekota, ihe omuma ojoo na otu ikpo okwu puru ighota ndi ozo. Nyere NAP ọjọọ a ka enwe mmetụta nke atọ kachasị njọ na ogo ọchụchọ mpaghara, ọ dị ezigbo mkpa ịchọpụta ya ma hichaa ya. A na-akpọ usoro a teknụzụ 'nyocha akwụkwọ'.
Nyochaa nyocha na-amalite na nchịkọta nke nyocha akwụkwọ ntuziaka maka ụdị dị iche iche NAP, yana iji ngwa ọrụ n'efu Ndepụta nyocha nke Moz, nke na-enyere gị aka inyocha ahụike nke NAP gị ozugbo gafee ụfọdụ nyiwe kachasị mkpa. Ozugbo achọpụtara ihe ọjọọ NAP, azụmahịa nwere ike iji aka ya rụọ ọrụ iji dozie ya, ma ọ bụ, iji chekwaa oge, jiri ọrụ akwụ ụgwọ. Fọdụ ọrụ ndị a ma ama na North America gụnyere Moz Mpaghara, Ulo Okpu, na Yext. Ihe mgbaru ọsọ kasịnụ nke nyocha nyocha bụ iji hụ na aha gị, adreesị gị, na akara ekwentị gị kwekọrọ n'otu o kwere mee, n'ọtụtụ ebe o kwere mee, n'ofe weebụ.
Mpaghara SEO Nzọụkwụ Ndị Ọzọ
N'afọ ndị na-abịanụ, azụmahịa mpaghara gị ga-etinye aka n'ụdị dịgasị iche iche nke ịzụ ahịa iji soro ụzọ thentanetị na omume onye ọrụ na-agbanwe, mana ọ dị mkpa ka e wulite ihe ndị a na ntọala nke isi. NAP na-anọgidesi ike, nnabata ụkpụrụ, yana mmepe ọdịnaya nke na-agbaso ezi uche, usoro kachasị mma ga-aga n'ihu na-emetụta ụlọ ọrụ mpaghara niile maka ọdịnihu dị nso, na-akpụ mpempe akwụkwọ mkpọpụta nke ga-eme ka nyocha niile nke teknụzụ ọchụchọ mpaghara pụta. Chọrọ ịhụ ka azụmahịa gị si apụta n'ofe weebụ?
Chọrọ ịhụ ka azụmahịa gị si apụta n'ofe weebụ?
Nweta Nkwupụta Ndepụta Mpaghara Moz
Tags: addressoku na-esochikpọọ nọmba nyochafacebook ebegeomodifiersgoogle mapGoogle+ Obodonchọta mpagharaobodo seoikemoz obodoahaỤranọmba ekwentịA